PSG oo qorsheyneysa in howlgal weyn ay ka sameyso suuqa kala iibsiga, iyagoo indhaha ku haya saddex xidig ka tirsan kooxda Real Madrid – Gool FM
PSG oo qorsheyneysa in howlgal weyn ay ka sameyso suuqa kala iibsiga, iyagoo indhaha ku haya saddex xidig ka tirsan kooxda Real Madrid
Dajiye May 14, 2019
(Yurub) 14 Maajo 2019. Paris St Germain ayaa qorsheyneysa inay isbedel weyn ku sameyso safka kooxdeeda suuqa kala iibsiga ee xagaaga, waxayna indhaha ku hayaan saddex ciyaaryahan ka tirsan Real Madrid.
Sida laga soo xigtay wargeyska caanka ah “Le Parisien” ee dalka France, kooxda PSG ayaa dooneysa inay la saxiixato saddexda xidig ka tirsan safka Real Madrid ee kala ah Toni Kroos, Francisco Isco iyo Gareth Bale.
PSG ayaa dooneysa in saddexdan ciyaaryahan ay ku xoojiyaan kooxda, iyagoo ujeedkooda uu yahay in xili ciyaareedka dambe ay meel fog ka gaaraan tartanka Champions League.
Taas badalkeeda kooxda Paris St Germain ayaa la filayaa inay ka dhaqaaqi doonaan xidigaha kala ah Edinson Cavani iyo Julian Draxler, iyadoo kooxda Faransiiska ah ay dooneyso inay iibiso labada ciyaaryahan si ay u maal galiyaan mashruucan cusub.
Hadii ay dhacdo inay yimaadaan saddexda xidig ka tirsan safka Real Madrid garoonka Le Parc des, waxay dhiiragalin weyn u noqon doontaa PSG, maadaama ciyaartoyda ku sugan haatan kooxda reer France ay u muuqdaan inay yihiin kuwo u baahan maskax guuleed.
Real Madrid ayaa dhaqaalo fiican ka sameyn karta bixitaanka saddexdan ciyaaryahan, iyadoo xidiga reer Germany ee Toni Kroos haatan lagu qiimeeyo aduun dhan 80 milyan euro, sidoo kale Isco ayaa isagana ku qiimeysan 60 milyan oo euros, halka Bale qiima ahaan lagu sheegay 70 milyan oo euros, laakiin PSG ayaa dooneysa inay hoos u dhigto qiimaha ku xusan ciyaartoydan.
Manchester United iyo Arsenal oo isku haysta saxiixa laacib ka tirsan kooxda Lille
Andrea Pirlo oo ku booriyay Juventus inay sameyso saxiixa xidig ka tirsan Real Madrid